Les Brehauts Farm Holiday Cottages - I-Airbnb
Uvimba sinombuki zindwendwe onguJulie
Sijonge phambili ekwamkeleni ukuba nihlale kwiindlwana zethu ezisanda kulungiswa. Embindini welali encinci, iFama yaseLes Brehauts ihleli kamnandi phakathi kwamabala amahle kunye neendlela eziluhlaza, kodwa yimizuzu nje embalwa ukusuka kwindawo yokutyela, iposi kunye nevenkile enkulu, kunye neebhasi ezidlulayo rhoqo nge-£1 nje yokukhwela. Okuya phambili kancinci kuya kukuthatha ucoce iindawo ezinesanti kunye nezinto ezininzi ezinomtsalane.
Izindlu zangasese zixhotyiswe kakuhle kwaye siyathemba ukuba uya kukufumana konke okudingayo ukuze uhlale ukonwabela.
EZINYE IINDWELE EZIBHEKELWA NGEHLOBO LIKA-2020 ZISEKUFUNEKA YIMPILO YOLUNTU EGUERNSEY UKUBA BAZAKHELE UKUYA KUYA KUYA KU-14 IINTSUKU EKUFENI. NCEDA UJONGE PHAMBI KWEBUKA.
Yonke indlu encinci inomatshini wokuhlamba / wokomisa, intsimbi kunye nebhodi yoku-ayina. Isomisi enwele, intlawulo yeCD kunye neTV ene-Free sat kunye nesidlali seDVD. Amakhitshi axhotyiswe kakuhle kakhulu ngefriji kunye negumbi lesikhenkcisi, i-microwave cooker kunye nehob.
Ukuba usebenzisa i-SAT NAV sebenzisa ikhowudi yeposi yeMorrisons, iSt Peters GY8 ODS. Sikwisiphambuka malunga neemitha ezingama-300 kude kwaye kwicala elinye. Khangela i-2 cartweel ebomvu kunye ne "Les Brehaut's" phezu komnyango.
Iteksi esuka kwisikhululo seenqwelomoya i-£7-£10
ibhasi 71 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya ngeyure £1 umntu ngamnye
Ndenza konke okusemandleni am ukuba ndifumaneke ukwamkela iindwendwe ukuba kunokwenzeka. Inombolo yam yeselula ikwakwisitshixo xa kukho unxunguphalo.